Nbudata Aermacchi MB-339 PAN FSX & P3D - Rikoooo
downloads 12 848
Massimo Taccoli, ngwugwu site Voyager
21 / 05 / 2017 : Emelitere na ọtụtụ ndozi, ọhụrụ repaints, ọhụrụ ụdị, ozi ọma gauges na mmetụta. Installer version 10.1
Nlereanya a bụ ihe zuru ezu rework nke mbụ MB-339A pan (Pattuglia Acrobatica nazionale) tọhapụrụ ụfọdụ afọ gara aga na mma visual nlereanya, na mebere kokpiiti. A ọhụrụ version nke nlereanya e dere textures maka a ọkọlọtọ atụ nke "Frecce Tricolori", na acrobatic agha Italian otu.
Biko gụọ ntuziaka. Cheta na: Ọ dịghị 2D panel, naanị Virtual kokpiiti
Rịba ama na maka ojiji izizi FSX ga-ajụ gị ka ị nara elele ahụ ntakịrị oge tupu ị nye gị ohere ịbanye na ya add-on, nke a bụ ihe ziri ezi, enwere otutu.
The Aermacchi MB-339 bụ a abụọ-seater Italian ọzụzụ agha, e mere na 1970s iji dochie MB-326. Sleek na racy, ọ nọkwa ịga nke ọma megide iwu nke ọzọ oge a na ugbo elu dị ka Bae egbe. Banyere 200 depụtaghachiri ha wuru, na-eji itoolu mba dị iche iche.
Onye edemede: Massimo Taccoli, ngwugwu site na Voyager